Cunto: Ka fogow daroogada Google Analytics
Dhibaatada spam dirirta ayaa soo qaadatay qaab khatar ah bilihii la soo dhaafay, laakiin diiradeenna waxa saaran sida looga fogaado Daroor ka Google Analytics. Talooyin badan ayaa lagu soo bandhigay arrintaan, laakiin midkoodna ma ahan mid lagu kalsoonaan karo, mana jiraan wax sharci ah oo aan ka saari karno gawaarida qaylada gebi ahaanba. Max Bell, oo ah Sare Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu xusuusinayaa in ay muhiim tahay in la xasuusto inaadan marnaba booqanin goobaha lagu tuhunsan yahay spammers kuwaas oo ka muuqda xogta Google Analytics.
Haddii aad diirada saarto taraafikada ee boggaaga iyo inaad eegto xogta soo iibsiga si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan meelaha laga helo taraafikada gaadiidka, waxaad arki kartaa in domain gaar ah oo ka muuqda liiska Google Analytics 'liiska gudbiyaha si joogto ah - it consulting company. Tani waxay badanaa u muuqataa liisaska gudbinta dhammaan bogagga internetka. Darodar wuxuu soo celiyay madaxiisa 2014-ka, iyo shabakado badan oo kala duwan ayaa soo aruuriyay dariiqa Daroor bishii Febraayo 2015. Kadibna, webmaster-yada waxa ay heleen hoos u dhac iyo sare u kac ah boggooda internetka, waxay waxyeelaynayaan xog badan oo internetka ah.
Waa in aad maskaxda ku haysaa in Daroor waa in laga saaro sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, maadaama ay wax u dhimi karto xogta falanqaynta ee boggaaga. Si kastaba ha ahaatee, marwalba waad saxi kartaa kedibinta koontada Google Analytics. Waa amaan inaad sheegto in spam u gudbinta wakhti la sii kordhiyay, halkaanna waxaan ku baraynaa sida loo wanaajiyo xogta falanqaynta iyada oo la adeegsanayo qaybaha iyo filtarrada.
Ma Daro Daran?
Darodar wuxuu ku fekeraa inuu noqdo barnaamij cilmi-baaris ah oo webmaster ah, laakiin macaamiil badan ayaa arkay in adeeggan uusan waxtar u lahayn. Si kastaba ha noqotee, Darodar waa uu xun yahay bogagga internetka, maadaama uu gaadiidku u dirayo spam in ay ku wadi doonaan labadiinaba iyo wakhtigaba.
Dareemayaal kala duwan iyo bloggers ayaa shaaca ka qaaday in Darodar uusan ahayn gudbin dhab ah laakiin waa gudbin gudbin ah oo burburin kara goobtaada internetka. Gaadiidka gudbinta waa marka qof isticmaalaya internetka uu isku xiro boggaaga internetka mana booqanayo bogga. Cafimeyaasha goobta boggaga tixraaca waxay u adeegsanayaan Goobaha Dib-u-celinta ee codsiga HTTP si ay kuugu wargeliyaan server-ka iyo hawlaha booqdaha ugu dambeeya.
Daroor sida masiibo
Haddii aadan waxba ka ogeyn Daroor, aan kuu sheegno in Google Analytics Google uu muujinayo booqashooyin been abuur ah iyo heerarka sare u kacsan ee aad caadi ahaan leedahay. Intaa waxaa dheer, muddada fadhiga iyo tirada bogagga lagu soo bandhigay casharka ma aha ilaa calaamad.
Gaadiidka Daroor wuxuu leeyahay saddex sifood oo muhiim ah:
Heerka qummanaanta waa boqolkiiba 100, kaas oo ka dhigi kara heerka xaddiga dhabta ah ee goobtaada
Muddada kulanku waa 0, taasoo hoos u dhigi karta celceliska muddada fadhiga.
Aragtida bogga ah ee yareyn karta celceliska bogagga lagu soo booqday midkiiba.
Ka saar Daroorada iyo spamka kale ee ka jira Google Analytics
Waa inaad baabi'isaa Daroor, iyo waraaqaha kale ee ka imanaya warbixinnada Google Analytics sida ugu dhakhsaha badan. Habka koowaad iyo kan ugu fudud wuxuu abuurayaa aragtida cusub ka hor inta aan la isticmaalin filtarrada. Sida filtarka View waxay bedeshaa xogta ay soo uruurisay Google Analytics, waa inaad hal aragto aragtida gaadiidka waana inaad abuurtaa aragtiyo cusub oo leh dhammaan filtarrada lagu dabaqay. Haddii kale, waxaad ka saari kartaa mustaqbalka gaadiidka Daroor iyadoo la adeegsanaayo fayradaha. Google Analytics View Filter waa qalab awood badan oo lagu xareeyo xogta. Waxaa muhiim ah in la aqoonsado domainska uu cudurku ku dhacay Daruuri. Waa inaad sii wadaa kormeerka tayada gaadiidka goobtaada oo aad wax ka bedbeddeli kartid.